I-Sanya yase China izikhuthaza njengendawo yabakhenkethi engena-visa eLatvia, eCroatia nase-Hungary
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » I-Sanya yase China izikhuthaza njengendawo yabakhenkethi engena-visa eLatvia, eCroatia naseHungary
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba eziseCroatia • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • IHungary Iindaba eziPhulayo • Iindaba zeLatvia eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Sanya yase China izikhuthaza njengendawo yabakhenkethi engena-visa eLatvia, eCroatia naseHungary
Abathunywa bamashishini abangamalungu amahlanu abavela kwidolophu yabakhenkethi base China USanya, uHainan, watyelela Lathviya, ECroatia naseHungary, njengenxalenye yemizamo kaSanya yokukhuthaza ubuncwane bayo obuninzi bezinto zokhenketho kumazwe aseBaltics naseNordic, ngeenjongo zokomeleza intsebenziswano notshintshiselwano lwamashishini phakathi kukaSanya nezixeko kule mimandla mibini. Abathunywa babekhokelwa nguRong Liping, uSihlalo weKomiti kaMasipala waseSanya yeNgqungquthela yezoPolitiko yaBantu baseTshayina, kwaye ekhatshwa ngamagosa avela kwiKomiti kaMasipala weSanya yeCPPCC, iSanya yezoKhenketho, iNkcubeko, iRadiyo, iTelevishini kunye neZiko leMidlalo, kunye neRhwebo likaMasipala waseSanya. Bureau.
Ukusukela nge-21 ka-Agasti ukuya kwi-22, igqiza latyelela iSebe lezoThutho laseLatvia, iArhente yoTyalo-mali noPhuhliso yaseLatvia, nakwisikhululo senqwelomoya saseRiga. Abathunywa bamkelwe ngokufudumeleyo ngumlawuli weSebe lezoThutho loMphathiswa Wezothutho waseLatvia u-Arnis Muiznieks, uMlawuli Jikelele we-Arhente yoTyalo-mali noPhuhliso u-Andris Ozols kunye no-Sihlalo weSikhululo senqwelomoya saseRiga i-Ilona Lice.
Nge-23 ka-Agasti ka-Agasti, iSanya City (Riga) Umnyhadala wokuKhuthaza, elinye lamanyathelo okuthunyelwa ekwandiseni ulwazi lweempawu zesixeko kunye nomtsalane okhethekileyo kubakhenkethi ngaphesheya kwelizwe laseTshayina, wabanjwa kwihotele iRadisson Blu Latvija eRiga. Ngaphezulu kweendwendwe ezingama-60, kubandakanya uSun Yinglai, uChargé d'affaires ai woZakuzo weRiphabhlikhi Yabantu baseTshayina kwiRiphabhlikhi yaseLatvia kunye noShen Xiaokai, uMcebisi wezoQoqosho noRhwebo kwiNdlu yoZakuzo yeRiphabhlikhi Yabantu baseTshayina kwiRiphabliki yaseLatvia. , Arturs Kokars, Umcebisi weBhodi eRiga International Airport, Marta Ivaninoka-Cjina, Ummeli weNkcubeko kunye noKhenketho e-China kwi-Arhente yoTyalo-mali noPhuhliso yaseLatvia kunye nabameli boluntu lwaseTshayina. IFinland neLithuania, bamenywa ukuba bathathe inxaxheba kumsitho wokukhuthaza.
Kwintetho yakhe kulo msitho, uNks. Rong uphakamise imigaqo-nkqubo ka-Sanya yokungahambisi visa yabantu abavela kumazwe angama-59 (nelinye lawo iLatvia) kunye neempawu zikaSanya ezinomtsalane kubakhenkethi nakubakhenkethi, egqiba kwelokuba “Kunzima ukuyichaza ngokupheleleyo Ngamagama ubuhle, amandla kunye nethemba likaSanya njengendawo yokhenketho. ” Umcebisi wezoqoqosho nezorhwebo kwindlu yozakuzo yase-China uMnu Shen kunye ne-Riga International Airport Umcebisi weBhodi Mnu.
UMaksims Pipekevics, ummeli ovela kwiarhente yezokuhamba, uthe kulo msitho “La mazwe mathathu akwiBaltics kunye namazwe aseNordic onke angamazwe angenazo i-visa kubahambi abaya kwiPhondo laseHainan. Abakhenkethi abavela kula mazwe akukho mfuneko yokuba bathathe ixesha ukufaka izicelo zokundwendwela kwaye bangahlala eSanya kangangeentsuku ezingama-30. Umgaqo-nkqubo ka-Sanya wezokhenketho ngaphandle kwe-visa uza kuba yeyona ndawo ithengiswayo. ”
Oko kwaqala unyaka, uSanya ebeququzelela imisebenzi yokukhuthaza ezokhenketho ukunceda iifemu zika Sanya zandise ukufikelela kwazo kwilizwe lonke, ukutsala utyalomali lwangaphandle, kunye nokuseka amajelo entengiso kunye namaziko okuphucula aphesheya. Isixeko sidibene neearhente ezaziwa kakhulu kwezokhenketho, kubandakanya uThomas Cook noColatour, ukumilisela imiboniso yezokhenketho kwihlabathi liphela. Amaziko okunyusa asele esebenza kwimimandla nakumazwe aquka iPhondo laseTaiwan, iHong Kong yoLawulo loMmandla wase-China, i-Indonesia, iMalaysia, iJapan ne-Indiya.